Lozam-pifamoivoizana :: Zaza roa maty tamina fiara nifatratra tamin'ny vodihazo • AoRaha
Lozam-pifamoivoizana Zaza roa maty tamina fiara nifatratra tamin’ny vodihazo
Nanakoako ny hiakiaka sy antso vonjy nataon’ny mpandeha tao amina taksiborosy iray marika «Mercedes Sprinter » tra-doza, tany amin’ny lalam-pirenena faha-25, tany Mavorano Manakara, omaly maraina.
Maty tsy tra-drano ny zaza roa, lahikely iray, enin-taona, sy vavikely iray, efa-taona. Nifatratra tamin’ny vodihazo ny fiara. Saika naratra ny ankamaroan’ny mpandeha niaraka tamin’ny mpamily. Fantatra fa olona enina ambin’ny folo no mbola notsaboina tany amin’ny hopitaliben’i Manakara, omaly tolakandro.
Ny angom-baovao nataon’ny mpitandro ny filaminana teny an-toerana no nahafantarana fa noho ny fisiana lavaka teo amin’ny arabe no nahatonga ny loza. Niala ny lavaka ny fiara. Tsy voavilin’ny mpamily ny familiana ka niala lalana ny fiara. Nidona tamina vody hazo lehibe iray, avy eo. Ny dona mafy niseho nandritra izany no nandratra ny mpandeha.
«Zanak’olona samy hafa ireo zaza roa nindaosin’ny fahafatesana ireo. Voatsindry tao anaty fiara ka izany no heverina ho antony nahafaty azy ireo teo no ho eo. Nisy tapa-tanana sy folaka ary naratra mafy ireo mpandeha. Voa mafy ihany koa ny mpamily », hoy ny zandary nanao ny fizahana teny an-toerana.
Notaomina tamin’ny fiara fitondrana marary nihazo ny hopitaly ireo naratra. Tsy maintsy mbola hohenoina sy hatao fanadihadiana izy ireo, amin’ny fotoana mahamety izany.
Fanafihana teny Itaosy